Celery (တရုတ်နံနံကြီး) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Celery (တရုတ်နံနံကြီး)
Celery (တရုတ်နံနံကြီး) ကဘာလဲ။
ရေးသားသူ Dr. Hlaing Min Ko Ko ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. K Zin Thwe
တရုတ်နံနံကြီး ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
အစေ့များကို ဆီးဆေးအဖြစ်အသုံးပြုသလို အဆစ်အမြစ်ရောင်ခြင်း၊ လေးဖက်နာဖြစ်ခြင်းများတွင်လဲ သုံးကြပါသည်။ အစေ့ဆီသည် အိပ်ပျော်စေသည့်ဂုဏ်သတ္တိရှိသည်။ တရုတ်နံနံကြီးကို အပင်ထွက်ဆေးအဖြစ်
• အဆစ်အမြင်နာခြင်း (လေးဖက်နာ) နှင့်ဂေါက်ရောဂါ
• စိတ်ကစဉ့်ကလျားဖြစ်ခြင်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားလွယ်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း
• အစာအာဟာရပြတ်လပ်၍ ဝိတ်ကျသွားခြင်း၊ အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ မောပန်းနွမ်းလျခြင်း တို့တွင်သုံးကြ၏။
တရုတ်နံနံကြီးသည် အသုံးကျယ်၏။ တခြားအသုံးများမှာ
• စိတ်ပြေလျော့ပြီး အိပ်ပျော်စေသည်
• ဆီးလမ်းကြောင်းမှ ဘက်တီးရီးယားများကို သေစေနိုင်သည်
• အစာကြေစေပြီး အူလှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းညှိပေး၏
• ဂလင်းများကို လှုံ့စော်ပေးနိုင်၏
• ရာသီလာစဉ် နာကျင်ကိုက်ကဲခြင်းများကို ကုသ
ဒီဆေးဖက်ဝင်အပင်ထွက်ပစ္စည်းအတွက် လုံလောက်သည့်လေ့လာမှုမျိုးမရှိသေးပါ။ ဒီထက်ပိုသိလိုသည်များရှိပါက သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးပင်ဗေဒဆရာများနှင့်ဆွေးနွေးပါ။ တစ်ချို့သောလေ့လာမှုများအရ တရုတ်နံနံကြီးသည် သွေးတိုးကျခြင်း ကိုလက်စထရောကျခြင်း စသည့်ဂုဏ်သတ္တိများရှိပြီး ထိုဂုဏ်သတ္တိများသည် tyrosine hydroxylase အင်ဇိုင်းကို ပိတ်ပင်နိုင်သောကြောင့်ဟု ဆိုပါသည်။ တရုတ်နံနံကြီးမှရသည့် ဓါတုဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သော alkaloid တစ်မျိုးသည် အတက်ရောဂါကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါသည်။
တရုတ်နံနံကြီး အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ခွဲစိတ်ကုသမှုမလုပ်ခင် နှစ်ပတ်ကြိုတင်၍ တရုတ်နံနံကြီးအသုံးပြုမှုကို ရပ်ထားပါ။
ဓါတ်မတည့်မှုရှိမရှိသတိပြုပါ။ birch-celery syndrome နှင့် ဓါတ်မတည့်မှုကြောင့်သွေးလန့်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။
သတိကောင်းမကောင်းအသုံးပြုမည့်လူကို သတိပြုပါ။ ပင်မအာရုံကြောအဖွဲ့အစည်းအား ဖိနှိပ်ထားခြင်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။
အစေ့များကို အစေ့ရေများနှင့်ရောမပစ်များနှင့်။ အသုံးမတူပါ။
တိုက်ရိုက်နေရောင်မထိအောင်ထားပါ။ တရုတ်နံနံပင်ထွက်ဆေးများကိုသုံးပါက အကာအကွယ်များကို ဝတ်ဆင်သင့်ပါသည်။
တရုတ်နံနံကြီးတွင်ပါသည့် Paorlen ဆိုသော ဓါတုဒြပ်ပေါင်းသည် အရေပြားတွင်အလင်းထိမခံနိုင်သောအကွက်များ ထစေနိုင်ပါသည်။
အပင်ထွက်ဆေးပစ္စည်းများကို ချုပ်ထိန်းထားခြင်းသည် ဆေးများကိုချုပ်ထိန်းခြင်းလောက် တင်းကြပ်မှုများမရှိပါ။ စိတ်ချလက်ချသုံးနိုင်ရန်အတွက် လေ့လာမှုများ ထပ်လိုနေပါသေးသည်။ အသုံးမပြုမှီ ဒီအပင်ထွက်ဆေးကိုသုံးပြီး ရရှိလာမည်အကျိုးသည် အန္တရာယ်ရှိသည်ထက် သာလွန်ကြောင်းသိဖို့လိုသည်။ ထို့ကြောင့် ဆေးပင်ဗေဒဆရာများ ဆရာဝန်များနှင့် သေချာဆွေးနွေးပါ။
တရုတ်နံနံကြီး က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
အောက်ပါရောဂါများရှိပါက တရုတ်နံနံကြီးကို မသုံးပါနှင့်။
အစားအသောက်ပုံစံနှင့်မှလွဲ၍ တခြားအပင်ထွက်ဆေးပစ္စည်းများကို ကလေးများအတွက်မသုံးပါနှင့်။
အများအပြားသုံးလျှင် သားအိမ်ကြွက်သားများကို ညှစ်စေနိုင်ပြီး ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်များနှင့် နို့တိုက်မိခင်များ အသုံးမပြုရပါ။
တရုတ်နံနံကြီး ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
အရေပြားရောင်ခြင်း၊ phototoxic bullous lesions (birch-celery syndrome)
ဓါတ်မတည့်ခြင်း၊ သွေးလန့်ခြင်း၊ လက်များခြေများဖောရောင်ခြင်း
(ယခုဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ခံစားရမှုမှာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် မပါဝင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါက သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။)
တရုတ်နံနံကြီး ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
တရုတ်နံနံကြီးဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။)
တရုတ်နံနံကြီးသည် တခြားသောဆေးများ၊ အပင်ထွက်ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ထို့အပြင် ကိုယ်တွင်းရှိ လစ်သီယမ် ပမာဏကိုလဲ ပြောင်းလဲစေနိုင်ပါသည်။
တရုတ်နံနံကြီး အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
လက်တလောတွင် တရုတ်နံနံကြီးအတွက် တိကျသောဆေးသုံးပမာဏမရှိသေးပါ။ လေနိုင်ဆေးအဖြစ်သုံးလျှင် အစေ့များကို ၁ – ၄ ဂရမ်းလောက်အထိသုံးကြပါသည်။
လိုအပ်သောဆေးပမာဏသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးမတူနိုင်ပါ။ သောက်သုံးရမည့်ပမာဏသည် အသက်၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့် တခြားအချက်များစွာအပေါ်မူတည်ပါသည်။ အပင်ထွက်ဆေးပစ္စည်းများသည် အမြဲတမ်းစိတ်ချရသည်မဟုတ်ပါ။ မှန်ကုန်သောဆေးပမာဏအတွက် သင့်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးပင်ဗေဒဆရာများနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြည့်ပါ။
တရုတ်နံနံကြီး က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
ဤအပင်ထွက်ဆေးကို ဆေးတောင့်၊ အစေ့၊ တင်ချာဆေးရည်အဖြစ် ရရှိနိုင်ပါသည်။
Skidmore-Roth, Linda. Mosby's Handbook Of Herbs & Natural Supplements. St. Louis, MO: Mosby, 2001.
Print version. Page 154.
Celery. http://www.drugs.com/npp/celery.html. Assessed August 6, 2016.
Celery. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono- 882-
celery.aspx?activeingredientid=882&activeingredientname=celery. Assessed August 6, 2016.